Baiboly pejy 8 - Ny Baiboly
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Manaraka Farany
Jenezy toko 14 (tohiny)
14Vao ren'i Abrama fa hoe lasan-ko babo ny rahalahiny, dia nomaniny ny ankohonany mahatoky indrindra amin'ny ady, izay teraka tao an-tranony, valo ambin'ny folo sy telon-jato, ka nenjehiny hatrany Dana ireo mpanjaka ireo. 15Natokotokony ny olona nentiny mba hanao sovok'alina izy sy ireto mpanompony, ka nandresy sy nanenjika an-dry zareo hatrany Hoba, ao an-kavian'i Damasy. 16Nentiny nody daholo ny fananana; azony koa Lota rahalahiny, mbamin'ny fananany, sy ny vehivavy ary ny olona rehetra.
17Nony efa nandresy an'i Kodorlahomora sy ireo mpanjaka nomba azy Abrama, ka nody, dia nivoaka ny mpanjakan'i Sodoma, hitsena azy tao an-dohasahan'i Save, dia ny lohasahan'ny mpanjaka izany. 18Melkisedeka mpanjakan'i Salema dia nitondra mofo sy divay: mpisoron'Andriamanitra avo indrindra izy. 19Dia nitsodrano an'i Abrama izy nanao hoe: Hanisy soa an'i Abrama anie Andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany. 20Ary isaorana anie Andriamanitra avo indrindra izay nanolotra ny fahavalonao ho eo an-tànanao. Ary Abrama kosa dia nanome azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra.
21Dia hoy ny mpanjakan'i Sodoma tamin'i Abrama: Omeo ahy ny olona fa ny fananana no ento ho anao. 22Fa hoy Abrama tamin'ny mpanjakan'i Sodoma: Izaho efa nanangan-tànana tamin'ny Tompo Andriamanitra avo indrindra, izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23fa tsy haka amin'izay rehetra mety ho anao, hatramin'ny singan-taretra ka hatramin'ny hoditra fehin-kapa, mba tsy hilazanao hoe: Izaho no nampanan-karena an'i Abrama. 24Tsy hitana na inona na inona ho ahy aho, afa-tsy izay nohanin'ny zatovo, sy ny anjaran'ny olona momba ahy dia Anera sy Eskola ary Mambre; ireo dia haka ny anjarany.
18Tamin'izany andro izany nanao fanekena tamin'i Abrama Iaveh nanao hoe: Omeko ny taranakao ity tany ity hatrany amin'ny onin'i Ejipta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia i Eofrata izany; 19Ny tanin'ny Sineana, ny Senezeana, ny Kadmoneana, 20ny Heteana, ny Ferezeana, ny Refaima, 21ny Amoreana, ny Kananeana, ny Zerizeseana ary ny Jeboseana.
15Dia niteraka zazalahy tamin'i Abrama Agara; ary nomen'i Abrama anarana hoe Ismaely ny zaza naterak'i Agara. 16Efa enina amby valo-polo taona Abrama tamin'ny niterahan'i Agara an'Ismaely tamin'i Abrama.
1Nony efa sivy amby sivy folo taona Abrama dia niseho taminy Iaveh ka nanao taminy hoe: Izaho no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra; mizora eo anatrehako ary aza manan-tsiny hianao; 2hanorina ny fanekeko aminao aho, sady hahamaro tsy hita isa anao.
Pejy: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Manaraka Farany